Uchwepheshe we-Semalt: Ungavimbela kanjani ukuphambene nogaxekile Okubhubhisa idatha yakho yokudluliselwa kwe-Analytics
Ngezinye izikhathi, iwebhusayithi yakho ingahle ithole ukuthunyelwa kwezimoto. Kulesi simo, lo mgwaqo ungabangela imiphumela eminingi embi ku-data yakho ye-analytics. Wonke ama-webmaster adinga idatha eqondile nenembile yezinjongo zokuthengisa nge-e-commerce. Ama-Spambot kanye neminye imithombo enikeza ugaxekile wokudlulisela ingase ibe nolwazi oluningi kwedatha yogaxekile - arizona commercial real estate appraisers. Kulesi simo, abasebenzisi bangathola ulwazi olungalungile mayelana nenqubekela phambili yenkambu ye-e-commerce. Ukuze ususe imoto engalungile kusuka kumininingwane yakho, kungase kudingeke ufunde ukuthi ungavimbela kanjani ugaxekile wokudluliselwa kusuka kudatha yakho ye-Analytics.
Kule ngqungquthela, uJack Miller, ilungu lezisebenzi ze-10 (Semalt Digital Services, unikeza amacebo amaningana angakusiza ukubuyisela umgwaqo oqondile:
Ukunquma imoto engalungile
Ezimweni eziningi, i-traffic fake ivela ezizindeni ezizama ukufihla amagama. Umgwaqo we-Fake ungatholakala emakhasini wokufika amanga . Izinhlangano ze-BlackO SEO ezithembisa imiphumela esheshayo ezishibhile zivame ukuba neningi lalezi zindawo zemoto. Amaketanga amakhulu we-botnet afaka ama-hostnames amaningi atshayela ikhasi lephony ukuvakashela kuwebhusayithi yakho. Ezimweni eziningi, lolu lwazi luphazamisa indlela abantu abaningi abaxhumana ngayo nale portal. Ukusetshenziswa kwabanikezeli be-imeyili abangaphephile kwandisa ingozi yokuthola lolu hlobo lomgwaqo.
Umsebenzisi we-inthanethi ononya angakwazi ukuthola i-ID yakho ye-Google Analytics yendawo..Ukusebenzisa i-ID yakho yendawo, angandisa noma anciphise noma yiziphi izimethrikhi uma nje azi ukuthi yiziphi izici ze-Google Analytics abazihlelayo. Yonke inguqulo ye-Google Analytics ingaphansi kwalolu hlobo lokuvakasha kwewebhu. Kwezinye izimo, abanye abahlinzeki be-imeyili bathambekele ukuthola ama-imeyili avela ezizindeni zogaxekile. Kubalulekile ukusebenzisa umhlinzeki we-imeyili ophephile kwizindawo eziningi.
Indlela yokuvimbela ugaxekile wokudluliselwa
Ungavimbela izizinda zabo zogaxekile usebenzisa ifayela le-.htaccess kumsuka wesizinda sakho. Abasebenzisi abasebenzisa iseva ye-Apache banenketho yokusebenzisa amakhodi amaningana kumawebhusayithi abo. Kubalulekile ukuthi unakekele uma usebenzisa lezi zinhlelo kwiwebhusayithi yakho. Amanye alawa amakhodi anekhono lokudonsa yonke indawo kusuka kuseva. Ngaphezu kwalokho, zingaholela engozini yokwandisa ugaxekile.
Ungasebenzisa futhi izihlungi zogaxekile ze-Google Analytics. Abaningi be-webmasters bane-akhawunti ye-Google Analytics ukuze babasize emsebenzini wabo we-analytics imisebenzi. Kumathebhu we-admin, ungavimbela ithrafikhi evela esizindeni esithile sokuzikhethela kwakho. Ungakwazi ukwengeza izihlungi zenkambiso ozikhethelayo. Lezi zihlungi zingavimbela imethrikhi yezimoto ezivela emasimini abegaxekile. Ungaphinda uhlunge ithrafikhi ngekheli le-IP. Ukusetshenziswa kwamakhukhi nezinye izici kungathuthukisa ukuphepha kuwebhusayithi yakho.
Ugaxekile wokudluliselwa kungaba umsebenzi obunzima obhekene nemisebenzi eminingi e-commerce. Ngokwesibonelo, abantu abasebenzisa iwebhusayithi ye-e-commerce bangase bahlangabezane nogaxekile okuningi kanye namanye amabhizinisi ahlukahlukene. Ukufunda ukuvimbela ithrafikhi yokudluliselwa kuyo kungaba nzima. Lesi siqondiso singakusiza ngamasu okuvikela ukugaxekile kokudluliselwa kokungena ekuphazamiseni ulwazi lakho lewebhusayithi. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukuhlunga amabhubhu ekwenzeni ukuvakashelwa kwewebhu okungalungile kusizinda sakho.